Guddiyo farsamo oo ka socda DF iyo DG iyo gobolka Banaadir ayaa shir looga hadlayo arrimaha…. – Hagaag.com
Guddiyo farsamo oo ka socda DF iyo DG iyo gobolka Banaadir ayaa shir looga hadlayo arrimaha….
Posted on 13 Febraayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Guddiyo farsamo oo ka kala socda dowladda Federaalka, maamul Goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa ay ku yeelanayaan shir loogaga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Guddiyadan ayaa si gaar ah waxa ay kulankooda ugaga hadli doonaan qodobada la isku haayo ee saldhigga u ah heshiiskii 17-kii bishii September ee 2020 laga gaaray doorashada dalka ka dhaceysa oo haatan uu khilaaf ka taagan yahay.
Min labo xubnood oo ka kala socda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa ka qeyb galaya Shirka, waxaana shirka fududeynaya Beesha Caalamka oo si dhow ula soconeysa arrimaha laga doodayo.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Guddiyada marka ay isku waafaqaan, iskuna soo fahmaan qodobada inay horkeeni doonaan Madaxda dowlad Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, si ay kama dambeysta u saxiixaan oo munaasabad saxiix un kaliya isugu imaan doonaan.